ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ရေအောက် ပလီဝတ်ကျောင်းတော်ကို ဆအူဒီအာရေဗျမှာ တည်ဆောက်သွားမည် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ရေအောက် ပလီဝတ်ကျောင်းတော်ကို ဆအူဒီအာရေဗျမှာ တည်ဆောက်သွားမည်
ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်သတင်း သတင်း အထူးသတင်း ♦♦♦ ၀၁ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၁၃
ဘာသာပြန် – မြင့်မြတ်သူ ( မြန်မာမွတ်စလင်မ် မီဒီယာ – MMM)
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ တခြား ရေအောက် အဆောက်အဦးတွေ တည်ဆောက်မှု ဖွံ့ဖြိုးလာမှုကနေ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ဒီရေအောက် ပလီ ၀တ်ကျောင်းတော်တည်ဆောက်ချင် တဲ့ အတွေးထွက် ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်
ဆအူဒီ အာရေဗျ နိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာပထမဆုံးရေအောက် ပလီ ၀တ်ကျောင်းတော် တစ်ခုကိုဆောက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီ ၀တ်ကျောင်းတော်ဟာ အနောက်မြောက်ဖက်ကမ်းရိုးတမ်းရဲ့ အဆုံး ဂျော်ဒန် နယ်စပ်အနီးမှာဆောက်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ပလီဝတ်ကျောင်းတော်ကို ဆအူဒီ အာရေဗျ နိုင်ငံက ရေငုတ်သမားများက စုပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ အနောက်မြောက်ပိုင်းမြို့ဖြစ်တဲ့ တာဘွတ်မြို့ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတမ်း အဆုံးမှာ သဲဖြည့်ထားတဲ့ ပလပ်စတစ်ပိုက်တွေကို အသုံးပြုတည်ဆောက် တာဖြစ်တယ်လို့ အာရဗီ ဘာသာစကားနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့ အလ်မာဒီယာ နေ့စဉ်သတင်းစာမှာ ဖေါ်ပြထားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နွေတုံးက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကောလိပ်တစ်ခုမှာ ဒီအတွေးကို ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒါကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြခဲ့တာပါ လို့ ရေငုတ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သူ ဟာမာဒန် ဘင် စလင်မ် အလ်မာဆူဒီက အလ်မရိတ် ၂၄/၇ ၀က်ဆိုက်မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပလီတည်ဆောက်တာ အခုပဲပြီးပါတယ် အပြီးသတ် အချောကိုင်မှုတွေလက်စသိမ်းတဲ့အချိန်ရောက်တော့ နေလည်ဝတ်ပြုချိန်ရောက်ပြီ ဖြစ်လို့ ကျွန်တော် တို့ သမိုင်းမှာ ပထမဆုံး ရေအောက် ပလီဝတ်ကျောင်းတော်မှာပဲ ပထမဆုံးစုပေါင်းဝတ်ပြုမှုကို စခဲ့ပါတယ်။
ဆအူဒီအာရေဗျ ဟာ အစ္စလာမ် စတင်ရာ နေရာဖြစ်ပြီး မြင့်မြတ်တဲ့ မက္ကာနဲ့ မဒီနာမြေတည်ရှိရာအရပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ တခြား ရေအောက် အဆောက်အဦးတွေ တည်ဆောက်မှု ဖွံ့ဖြိုးလာမှုကနေ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ဒီရေအောက် ပလီ ၀တ်ကျောင်းတော်တည်ဆောက်ချင် တဲ့ အတွေးထွက် ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းက ကမ္ဘာ့ရေအောက် သံဝိုင်းပြားဟော်တယ်အား အထက်စီးမှ မြင်ရမည့်ပုံ
ကမ္ဘာ့ သံဝိုင်းပြား ဟော်တယ် လို့ အမည်ရတဲ့ ရေအောက်ဟော်တယ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံက မကြာခင်ကပဲကြေငြာသွားခဲ့ပါတယ်။ သံဝိုင်းပြားဟော်တယ်လို့ အမည်ပေးရတာက ဟော်တယ်ရဲ့ပုံစံက သံဝိုင်းပြားတွေ ပုံစံ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားလို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဒူဘိုင်းက ရေအောက်သံဝိုင်းပြားဟော်တယ် ဘေးဒေါင်လိုက် ဖြတ်ပိုင်းမြင်ကွင်း
This entry was posted on January 1, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ၂၀၁၂ ခုနှစ် မြန်မာမွတ်စလင်မ် သတင်း အနှစ်ချူပ် စုစည်းမှု့ (အပိုင်း-၁)
ကမ္ဘာ့ဝိပဿနာ တရားပြဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာ၏ ဓမ္မနိုင်ငံ၌ ၁၃၅ နှစ်ကြာ တရားပွဲ ကျင်းပ →